Fanajariana ny tanàna: hipoka tanteraka ny tsena sy ny elakela-trano ao Mahanoro | NewsMada
Fanajariana ny tanàna: hipoka tanteraka ny tsena sy ny elakela-trano ao Mahanoro
Velon-taraina amin’ny afitsoky ny ben’ny Tanàna ao Mahanoro amin’ny tsy fahaiza-mtantana ny mponina ao an-toerana. Efa mahatsiaro ho sempotra ny fokonolona noho ny tsy fisian’ny rafi-pandaminana. Tsy mandry fahalemana ny vahoaka. “Tsy misy iateheranay amin’ny kominina ambonivohitra na kely aza”, hoy kosa ben’ny Tanàna. Fanadihadiana.
Iray amin’ireo distrika 18 mandrafitra ny faritanin’i Toamasina i Mahanoro, misy ny kaominina ambonivohitra Mahanoro. Mirefy 350 km2 izany, tsinjarain’ ny fokontany 21 sy zana-tanàna maro samihafa ary misy mponina 33 000.
Efa mahatsiaro ho hipoka sy sempotra ny fokonolona noho ny tsy fisian’ny rafi-pandaminana
amin’ny fanamboaran-trano. Manisika olona hanao trano araka izay tiany avy hatrany ny ben’ny Tanàna, efa feno hipoka ny tsena nefa, raha vao misy manome vola azy, eny na hatramin’ny rindrin-tranonao sy ny tokotany aza, rehefa mangataka raha manome vola azy ny olona”, hoy ireo rehetra naneho hevitra tao an-toerana. Nambarany hatrany fa lavitra ny tanàna ilay tsena vaovao ka mahatonga ny mpivarotra lasa misesika eto amin’ny tsena teo aloha izany.
Nambaran’ireto fokonolona ireto fa efa tsy hita intsony izay tokony haleha fa hatrany
anelakela-trano aza, efa lasa tsena avokoa kanefa mbola azo lazaina ho tanàna kely ihany i Mahanoro.
Andaniny, mirongatra izaitsizy ny tsy fandriampahalemana. Nisy ny vonoan’olona tao Mekara sy tao Papagnambo. Renim-pianakaviana avy nitondra varotra ka hody any ambanivohitra any Mangihidy no nisy nandroba, nandrahona tamina basy. “Mirongatra ny vaky fasana sy vaky trano”, hoy i Velotody Bernard, raiamandreny ao an-tanàna.
Tsy misy fotodrafitrasa
Raha eo amin’ny fotodrafitrasa, azo lazaina ho faralahy ny ao Mahanoro. Mbola godorao efa tamin’ny taonjaton’ny fanjanahantany ny lalana mamakivaky ny tanàna avy eny am-pidirana ka hatrany amin’ny fivoahana ny RN 11. Ny herinaratra avy amin’ny masoandro nataon’ny Sinoa nanazava ny lalana sy ny elakela-trano aza, efa tapitra very avokoa. Tsy mandeha ny rano raha tapatapaka kosa ny herinaratra avy amin’ny Jirama. Saika ahitana maloto mipetrapetraka manerana ny tanàna sy ny elakela-trano, eny hatrany amoron-dranomasina. Tsy misy trano fivoahana manara-penitra hampiasain’ny vahoaka. Tsy ampy ny fotodrafitrasa fandraisam-bahiny ry tsizarizary ireo efa mitsangana ao an-toerana satria taterina amin’ny siny ny rano ka tsy mahafa-po ny mpizahatany sy vahiny ao an-toerana izany.